Ma Dhageysaneysaa? | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 30, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Weligaa waqti ma siisay inaad la xiriirto astaan ​​ama shirkad khadka tooska ah si aad uga warbixiso arrin ku saabsan adeegga macaamiisha ama arrin ku saabsan alaabta ama adeegga?
Weligaa ma niyad jabtay markii sumadda ama shirkaddu ay si fudud uga jawaabi waayeen codsigaaga? Codsiga aad waqti ku qaadatay inaad sameyso?
Aynu wajahno - kulligeen waan mashquulsannahay oo noloshu waxay marto jidka warbaahinta bulshada mararka qaarkood. Laakiin sidoo kale waa qaar ka mid ah shaqooyinkeenna inay mas'uul ka yihiin ka jawaabidda mid kasta (oo macquul ah iyo mid dhab ah) oo laga codsado shabakadaha warbaahinta bulshada. Qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda suuqgeynta, waxay isla markiiba aadaan isha warbaahinta bulshada si ay uga warbixiyaan dhibaatada ay kala kulmeen astaanta. Markay heli waayaan jawaab ama jawaab, waxaa la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa ka fikirka beddelashada noocyada. Adduunyo badan oo suuqleyaal ah iyo noocyo badan, tani waa khatar qatar ah oo shirkadaha ay qaadan karaan.
Kadib, waxaa jira dhinaca kale ee lacagta: dadka qaarkiis waxay ku sheegaan magacyada khadka tooska ah, laakiin ma calaamadeyn doonaan astaanta si shirkaddu aysan ugu digin in qof uu ka cawday Tani waxay noqon kartaa uun masiibo maadaama aan laga jawaabin. Waxaa jira fursado badan oo lumay markii aan lagaa digin markii magacaaga la xuso ama aadan dabagal ku hayn xogtaas.
Siyaabaha aad ku hormarin karto dhageysiga bulshada
U diyaarso digniino ereyada muhiimka ah ee magacaaga - Kaliya ha isku halleynin shabakadaha warbaahinta bulshada inay kuu sheegaan marka qof ku sheego; hubi inaad samee digniinta Google ereyada ku habboon (magaca shirkadda, naanaysta shirkadda, alaabada shirkadda, iwm.)Hootsuite .
Diyaarso waxyaabaha laga filan karo goorta aad diyaar u tahay inaad ka jawaabto codsiyada - Mararka qaarkood, dadku way jahwareersan yihiin markaad wax jawaab ah ka bixin weydo waqtiga ku habboon. Waqti badan, dadku waxay u maleyn karaan in calaamadaha had iyo jeer loo heli karo jawaabaha warbaahinta bulshada. Taasi had iyo jeer run maahan. @VistaPrintHelp shaqo fiican ayuu ka qabtaa dejinta rajooyinkan. Waxay siiyaan waqtiyo iyo maalmo ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan codsiyada:
Sii Qorshe B - Haddii aadan haysan taageerada 24ka saac ee warbaahinta bulshada, markaa xiriir ha la heli karo oo leh macluumaadka xiriirka ee dadku u isticmaali karaan inay kula xiriiraan shirkaddaada wakhti kasta. Waxaan kugula talin lahaa inaad yeelato emayl (ama foom), taleefan, ama nidaamka wada hadalka.
Dhibka ka saar khadka - Intaad dhageysaneysid, haddii aad la kulanto macmiil xanaaqsan, ka dibna isku day inaad macaamiisha ka saarto khadka. Ku siiyaan lambarka taleefanka ama emayl lagu soo heli karo, ka dibna bilow wadahadalka sida loo caawiyo. Marka dhibaatada la xalliyo, waxaad si guud u soo dhejin kartaa sida aad u xallisay dhibaatada oo waxaad weydiin kartaa macmiilka haddii ay ku qanacsan yihiin. Inaad diyaar noqoto oo aad ka warqabto waxa laga sheegayo astaantaadu waa furaha. Waxay u horseedi doontaa macaamiil faraxsan (xitaa haddii aysan si ku meelgaar ah u faraxsanayn), iyo dakhli badan.
Tags: Adeegga macaamiishasumcaddhageysiga bulshadawarbaahinta bulshadakormeerka bulshadavistaprint